Tilmaamo cusub oo xiiso leh oo loogu talagalay Maareeyaha Plugin Smart | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Tilmaamo cusub oo xiiso leh oo loogu talagalay Maareeyaha Plugin Smart
Tilmaamo cusub oo xiiso leh oo loogu talagalay Maareeyaha Plugin Smart
Nidaamka deegaanka plugin waa mid ka mid ah qaybaha ugu firfircoon uguna xiisaha badan ee WordPress. Iyada oo ku dhawaad ​​​​55,000 plugins bilaash ah laga heli karo hadda kaydka plugin WordPress.org, waxaad ku dari kartaa sifooyin iyo shaqeyn aan la sheegin goobtaada (yada) kaa caawin doona ganacsigaaga inuu kor u kaco. Marka lagu daro buug-yarahaas weyn ee plugins-yada bilaashka ah, kumannaan plugins oo dheeraad ah ayaa laga heli karaa boggaga internetka ee dhinac saddexaad sida Github.
Plugins WordPress waa in had iyo jeer la cusbooneysiiyaa isbeddelladaas waa in lagu dabaqaa goobtaada isla markiiba. Ku guuldareysiga in la cusbooneysiiyo plugins-yada waxay furi kartaa goobta WordPress ilaa dilaacyo nuglaanshaha amniga iyo waxqabadka daciifka ah. In kasta oo ay muhiim tahay, dayactirka plugin ayaa weli ah caqabad weyn isticmaalayaasha WordPress badan. Nidaamku gabi ahaanba waa gacanta, sidaa awgeedna, waa mid caajis badan oo waqti badan qaadata. Natiijo ahaan, qaar badan oo ka mid ah milkiilayaasha goobuhu waxay isku dayaan inay xaddidaan tirada plugins ee ay tahay inay cusbooneysiiyaan laakiin marka ay sidaas samaynayaan, waxay waayaan mid ka mid ah awoodaha ugu weyn ee WordPress ay bixiso.
Bishii Juun, WP Engine wuxuu bilaabay Maareeyaha Plugin Smart-maareeyaha kaliya ee dhammaystiran ee WordPress-si uu wax uga qabto dhibaatadan oo uu u fududeeyo goobuhu inay ka faa'iidaystaan ​​​​dhammaan plugins-yada waaweyn ee WordPress ee jira si ay uga caawiyaan ganacsigaaga inuu kobco. Maareeyaha Plugin Smart wuxuu si toos ah u eegaa plugins-ka wixii cusbooneed ka dibna wuxuu bilaabaa cusboonaysiintaas habeen (ama waqti kale oo la door bidayo) si dayactirka plugin had iyo jeer loo xakameeyo oo aan arag.
Maamulaha Plugin ee Smart waxa kale oo uu shaqaalaysiiyaa sirdoonka macmal ah oo ah qaabka tijaabada dib u celinta aragga iyo barashada mashiinka si loo hubiyo in dhammaan casriyeynta plugin ay si guul leh u dhammaatay, iyada oo aan keenin cawaaqib aan la qorshayn ama khaladaadka goobaha isticmaalayaasha.
Tan iyo markii la bilaabay in ka badan afar bilood ka hor, Maareeyaha Plugin Smart wuxuu si badbaado leh u cusboonaysiiyay in ka badan 70,000 plugins wuxuuna kasbaday boqolaal macaamiisha WP Engine. Waxaan la xiriirnay macaamiishaas si aan wax uga weydiino sifooyinka mustaqbalka iyo horumarinta alaabta waxaana helnay jawaab celin aad u wanaagsan.
Annaga oo ku hubaysan talooyinka macmiilaha, waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno siidaynta astaamo cusub oo loogu talagalay Maareeyaha Plugin Smart, oo ay ku jiraan cusboonaysiinta plugin shakhsi ahaaneed, xulashooyinka iimaylka macmiilka ee la cusboonaysiiyay, iyo kordhinta muuqaalka iyo xakamaynta isticmaale.
"Cusbooneysiyadan cusub, faa'iidada ugu weyn ee macaamiisha ayaa ah in SPM ay hadda leedahay heerka guusha sare ee cusbooneysiinta la dabaqay, inkasta oo ay horeyba u ahayd mid aad u sareysa," ayuu yiri Peter Mocko, maamulaha injineernimada sare ee WP Engine oo kormeeray wareegii ugu dambeeyay. horumar.
Halkii aad hal mar cusboonaysiin lahayd dhammaan plugins-yadaada, Maamulaha Smart Plugin waxa uu hadda u cusboonaysiiyaa plugin-yada mid mid waxana uu mid kasta u wadaa tijaabada dib u celinta aragga. Marka ay jiraan arrimo ku saabsan cusboonaysiinta, tani waxay bixisa muuqaal weyn oo ku saabsan waxa qaldamay iyo plugin kee mas'uul ka ah. "
Natiijooyinka kale ee habkan, Mocko wuxuu yidhi, waa qaab cusub oo ogeysiis email ah isticmaalayaasha SPM ka dib marka wareegyadooda cusbooneysiinta ay dhammaato.
" Way caddahay, waxay bixisaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan natiijooyinka cusboonaysiinta, dhinaca kale, waxay xaddidaysaa macluumaadka aan khusayn, si dadka isticmaala ay si dhakhso ah u arki karaan sida ay cusbooneysiintoodu u qabsoomeen oo ay u socdaan."
Hoos ka eeg macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan wareegii ugu dambeeyay ee cusboonaysiinta Maareeyaha Plugin Smart.
Cusbooneysiinta Plugin Shakhsi ahaaneed
Ilaa hadda, Maareeyaha Plugin Smart wuxuu u soo bandhigay isticmaaleyaasha awood ay ku cusbooneysiiyaan dhammaan pluginskooda isku mar, taasoo la micno ah in isticmaalayaashu ay sameeyeen cusbooneysiin bulk mar kasta oo ay rabaan inay cusbooneysiiyaan xitaa hal plugin. Mar dambe maaha. Waxaan maqalnay macaamiisheena cod dheer oo cad iyo Maamulaha Plugin Smart wuxuu hadda u cusbooneysiiyaa plugins si gaar ah.
Rajadayada ayaa ah in shaqadan lagu daray ay siin doonto isticmaaleyaasha kontorool dheeri ah oo ku saabsan plugins-yada u baahan cusboonaysiinta marka, oo ay ka dhigaan habka cusboonaysiinta xitaa mid sahlan iyadoo la baabi'inayo dib-u-soo-noqoshada dhammaan cusboonaysiinta haddii cusboonaysiinta plugin shaqsiga uu ku guuldareysto.
Cusbooneysiinta Iimaylka Ikhtiyaarka
Sida kor ku xusan, Maamulaha Plugin Smart wuxuu isticmaalaa tijaabada dib u celinta muuqaalka ka dib cusboonaysiinta plugin kasta si loo hubiyo in goobaha isticmaalayaashu ay wali u shaqeeyaan sidii la filayay. Marka habkan la dhammeeyo, isticmaalayaashu waxay helayaan iimayl wata natiijooyinka, iyaga oo ogaysiinaya haddii pluginskooda si guul leh loo cusboonaysiiyay iyo in kale.
Markii hore, Maareeyaha Plugin ee Smart kaliya wuxuu u oggolaaday isticmaaleyaasha inay isticmaalaan hal ciwaan iimayl si ay u helaan iimayladan xaqiijinta ah, taas oo aan ku habboonayn kooxaha dad badan oo maamula dayactirka goobta. Maareeyaha Plugin Smart hadda wuxuu u oggolaanayaa isticmaaleyaasha inay geliyaan iimaylo badan warbixinnada dayactirka plugin. Intaa waxaa dheer, waxaan cusbooneysiinay iimaylada si aan uga caawino xaqiijinta hufnaan dheeraad ah oo ku saabsan waxa la cusboonaysiiyay, la tijaabiyay, iyo haddii guuldarradu dhacdo waa maxay guuldarradaas. Hadafkayaga leh isbeddelladan u muuqda kuwa fudud ayaa ah inaan bixinno muuqaal badan oo kooxo iyo hay'ado waaweyn ah, kuwaas oo inta badan la wadaaga mas'uuliyadda plugin iyo dayactirka goobta kale ee xubnaha kooxda badan.
Lagu Daray Muuqaalka iyo Xakamaynta Isticmaalaha
Marka lagu daro tijaabinta dib u noqoshada aragga, Maareeyaha Plugin Smart wuxuu adeegsadaa tijaaboyin gaar ah iyo algorithms barashada mashiinka ka dib markii plugins la cusboonaysiiyo si loo hubiyo khaladaadka jawaabta serverka, kood jaban, iyo isbeddellada muuqaalka. Markii hore, wax yar baa loo habeeyay imtixaanadan. Isticmaalayaashu ma ay lahayn awood ay ku doortaan qaybta (qaybaha) boggooda ee ay rabaan inay tijaabiyaan, taas oo dhib ku ah boggaga leh boggaga ama qaybaha bogga kuwaas oo si joogto ah u abuuray natiijooyin been ah ogeysiisyada qaladka. Tani waxay si gaar ah run ugu ahayd macaamiisha isticmaalaya waxyaabo firfircoon, sida muuqaallo ama sawirro carousel ah, oo ku yaal goobtooda.
Hadda, isticmaalayaasha Maareeyaha Plugin ee Smart waxay ka saari karaan dhammaan boggaga ama qaybaha bogga habka tijaabada cusboonaysiinta kadib. Isticmaalka qaybo ka mid ah CSS, isticmaalayaashu waxay kala saari karaan qaybo ka mid ah boggaga u baahan in la boodo inta lagu jiro baaritaanka qaladka. Haddii macaamiishu ay leeyihiin bog dhan oo si weyn u isticmaala plugins oo ay rabaan inay hubiyaan in la hubiyay ama haddii ay leeyihiin bog u nugul tijaabinta guuldarada, waxay isticmaali karaan khariidad goobta gaarka ah si ay u doortaan boggaga loo baahan yahay in la tijaabiyo. Ugu dambayntii, waxaan rajaynaynaa in tani ay siinayso isticmaalayaasha koontarool weyn iyo caddayn waxa jira iyo kuwa aan la tijaabin iyada oo qayb ka ah cusbooneysiintooda plugin.
Astaamo cusub oo horudhac ah
Bilaha soo socda, waxaan u soo daabici doonaa astaamo cusub oo dheeraad ah Maareeyaha Plugin Smart si uu uga dhigo mid faa'iido badan leh. Astaamaha cusub waxaa ku jiri doona waayo-aragnimada isticmaale ee la wanaajiyey taas oo sii wanaajisa habsocodka cusboonaysiinta, iyo dejinta maaraynta badan ee dheeraadka ah ee hagaajiya dayactirka plugin ee goobo badan. La soco waxii kasoo kordha
Wax badan ka baro Maamulaha Plugin Smart
Maareeyaha Plugin ee Smart hadda waxa loo heli karaa ku-dar dhammaan noocyada qorshaha WP Engine. Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan sida ay u shaqeyso, fiiri warqadan cad, oo bixisa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sababta ku haynta plugins-ka casriga ah ay muhiim u tahay, iyo sidoo kale faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida Maamulaha Plugin Smart uu u habeeyo habkan oo uu u fududeeyo si fudud ayaad u nasanaysaa, adigoo og in dayactirka plugin aad gacanta ku hayso.
Ma xiisaynaysaa wax-qabadyada kale ee WP Engine? Eeg Amniga Edge Global, Kormeerka Waxqabadka Codsiga, iyo GeoTarget.
U isticmaal 'Two-face Mullet Strategy' adigoo isticmaalaya Apple Watch
Dib u eegista Domains Google: Faa'iidooyinka vs Qasaarooyinka (Sida Loo Diiwangeliyo Magaca Domain)